Wasiirka Warfaafinta Ethopia oo ka hadlay rabshadihii Jigjiga kadhacay (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 7, 2018 5:25 g 0
Wasiirka Warfaafinta Dalka Ethopia Axmed Shido oo shir jara’id ku qabtay maanta magaaladda Adis Ababa ayaa ka hadlay isbadalka hogaanka Maamaulka DDSI Iyo rabshadihii u danbeeyay ee ka dhacay dhulka Soomali Ethopia kuwaas oo looga soo horeeday Ciidanka Milatriga dalkaas .
Axmed shido ayaa sheegay in Isbadalkaan uu qeyb ka yahay kan uu Horseedka ka yahay raiisal wasaraha Ethopia Aby Axmed laguna ilaalinayo Xuquuqda Isaanka waa sida uu hadalka u dhigaye .
Wasiirka warfaafinta Ethopia oo Hadalkiisa siiwata ayaa wuxuu ugu baaqay dadka ku dhaqan Maamulka DDSI Inay isdajiyaan lana shaqeeyaan Ciidamada Amnaka kana qeyb qaatana isbadalka socda .
Soomalida ku nool DDSI Ayaa waxaa sanadihii u danbeeyay oo dhan ay ka Cabanayeen Gacanta birta ah ee Madaxweynhii shalay is Casilay Cabdi Maxamuud Cmar iyo Talikiis Xayla Mraryam oo isna 4 Bilood k hor is Casilay .
Wasiirka ayaa dadka Halkaas ku nool ka Codsaday inay Nabad galyada dhowraan wuxuuna ka Tacsiyeeyay Dadkii ku dhinty rabshadihii ka dhacay Jig Jiga iyo magaalooyin kale oo DDSI Ah.